Ajụjụ - Linqing Xinri nkenke Iburu Co., ltd.
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu. ọmarịcha igbe ahụ na katọn ya na pallets siri ike. Ọ ga-adabara maka ụgbọ mmiri,
ụgbọ mmiri, ụgbọ njem ala na ma mba awara awara.
Ọnụahịa mbufe ahụ dabere n'ụzọ ị họọrọ iji nweta ngwaahịa. Express bụ ejikarị ndị kasị quickest kamakwa kasị oké ọnụ ụzọ. Site seafreight bụ ihe ngwọta kasịnụ maka nnukwu ego. Kpọmkwem ibu udu anyị nwere ike na-enye gị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke ego, ibu na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka inwekwu. .ozi.